Fikarohana momba ny firaisana Raharaha fanalefahana indray an'i Zora Neale Hurston | Queen Latifah: Mpanolotsaina ho an'ireo Amerikana afrikanina manerana ny fiainana roa - Reinkarnation fikarohana
Zora Neale Hurston dia afrikana-amerikana teraka tao 1891 any Alabama. Mpanoratra sy mpamorona horonantsary izy izay mampiseho ny tolona, ​​misy ny fanandevozana sy ny fisarahana, izay atrehin'ireo mainty hoditra any Etazonia. Maty tamin'ny 1960 i Zora.
Queen Latifah, izay niteraka ny anarany hoe Dana Owens, dia teraka tao 1970 tao New Jersey. Izy dia mpihira, mpilalao sarimihetsika ary mpamokatra mozika, izay mihetsika manodidina ny traikefa afrikanina-amerikana any Etazonia. Nahazo loka roa NAACP izy noho ny fandraisany anjara tamin'ny kolontsaina afrikanina-amerikana.
Tao anatin'ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re, mpitari-dàlana avy amin'ny fanahy nampitaina tamin'i Kevin izay naneho ny fahaizana manao lalao mandrindra ny fiainana taloha miaraka amina fepetra avo lenta, dia nanamafy fa ny Mpanjakavavy Latifah dia ny fahaterahan'i Zora Neale Hurston.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana manaitra eo amin'i Zora Hurston sy Queen Latifah. Kitiho ny fampitahana ny sary mba hanitarana azy.
Talenta fiainana taloha, fahaizana ary finaritra: Samy naneho faharanitan-tsaina sy fahaiza-mamorona i Zora Hurston sy i Queen Latifah tamin'ny fanehoana ny fiainana sy ny tolona, ​​anisan'izany ny tsy rariny sy ny fitsarana an-tendrony izay natrehin'ireo Afrikanina-Amerikanina.